yeedan ugu jirtaa khilaafka kenya iyo somalia ? | Banaadir Times
HomeXulashadayeedan ugu jirtaa khilaafka kenya iyo somalia ?
Bishii Diseembar, Soomaaliya waxay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Kenya iyada oo ku eedeysay inay marar badan “faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha” ayna “ku xadgudubtay madaxbannaanideeda”. Tallaabadani waxay keentay xiisadaha mudada dheer ka dhex taagnaa labada deris ee dusha sare ah waxayna keeneen xaalad gogol-xaadh ah oo yeelan doonta ciqaab ballaadhan oo juquraafi ah haddii aan si dhakhso ah loo xallin.
Labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya midkoodna ma awoodi karo in khilaafku isu beddelo xiisad daba dheeraatay: Labada waddan ee Bariga Afrika waxay wadaagaan soohdin dhuleed oo aad u dheer waxayna leeyihiin xiriir dhaqan dhaqaale oo adag.
Xaqiiqdii, Soomaaliya waxay hadda hoy u tahay tobanaan kun oo shaqaale Kenyan ah oo door muhiim ah ka ciyaara shirkadaha, gargaarka, adeegga iyo martigelinta dalka. Ilaa horraantii Diseembar, Soomaaliya waxay la lahayd heshiis fiiso-imaatin ah Kenya, taas oo u oggolaanaysa muwaadiniinta Kenya inay si fudud uga ganacsadaan waddanka.
Dhinaca kale Kenya waxay martigalisaa boqolaal kun oo qaxooti soomaali ah waxayna hoy u tahay dad aad u tiro badan oo isir ahaan soomaali ah. Waxay sidoo kale si weyn u maalgashatay dib u dhiska Soomaaliya ee colaadihii ka dambeeyay waxayna martigelisay shirar dhowr ah oo door muhiim ah ka ciyaaray guusha laga gaadhay dadaallada nabad dhisidda Soomaaliya Qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa sidoo kale maalgashi muhiim ah ku leh Kenya sababo la xiriira xoogaa wanaagsan oo xagga shaqada iyo suuqyada dalka ah.
Intaas waxaa sii dheer, Kenya waxay ka mid tahay waddamada ay ciidamada ka joogaan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxayna labada dal hadda la dagaallamayaan cadow la wadaago oo qatar ku ah nabadgelyadooda iyo xasilloonidooda: Al-Shabab.
Xididdada badan ee dhibaatada Kenya iyo Soomaaliya
In kasta oo masuuliyiinta Soomaaliya aysan weli shaacin sababaha gaarka ah ee ka dambeeya go’aankooda ay xiriirka ugu jareen Kenya, waxaa jira dhowr xiisadood oo caan ku ah xiriirka labada dal oo ay u badan tahay inay wadada u xaaraan tallaabada.
Isku dheelitir la’aanta ganacsi ee ka dhexeysa deriska iyo Kenya oo si isdaba joog ah u hakisay howlihii ganacsiga ee xuduudaha isaga gudbayay sanadihii la soo dhaafay sababo la xiriira “walaac xagga amniga ah” ayaa ka mid ah qodobadan xiisadda.
Ka ganacsiga qaadka, dhir firfircoon oo si weyn ugu baaha Kenya, wuxuu hadda udub dhexaad u yahay khilaafaadka ganacsiga ee u dhexeeya labada ummadood. Soomaaliya, oo ah halka sida weyn looga cuno Qaadka, waxay muddo dheer ahayd suuqa ugu weyn ee Kenya ay u dhoofiso geedka cagaaran ee casaanka ah, ee la calaliyo. Hase yeeshee, bishii Maarso, Soomaaliya waxay si rasmi ah u mamnuucday Qaadkii laga keeni jiray Kenya, iyadoo sabab looga dhigay faafitaanka COVID-19. Tallaabadan ayaa dad badani u arkeen isku day ay Muqdisho ku doonayso inay Qaadka u adeegsato qashin gorgortanka dadaallada ay ugu jirto inay xiriir ganacsi oo dheelitiran la yeelato Nairobi.
Soomaaliya sidoo kale kuma qanacsana diidmada Kenya ee ah inay fiiso siiso muwaadiniinteeda marka ay timaado, in kasta oo qorshaha noocaas ah la isku raacay sanadka 2019 intii uu socday kulanka u dhaxeeyay Madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo dhigiisa Kenya, Uhuru Kenyatta.
Jubaland, oo ka mid ah shanta dowlad-goboleed ee Soomaaliya ee xadka la leh Kenya, ayaa ah isha kale ee xiisadda ka dhex aloosan labada dal ee deriska ah. 30-kii Nofeembar, Soomaaliya waxay eriday safiirkii Kenya waxayna dib ugu yeertay wakiilkeedii Nairobi, iyadoo ku eedeysay Kenya inay faragelin ku hayso howlaha doorashada ee gobolka. Mas’uuliyiinta maxalliga ah ee Jubaland waxay ku andacoonayaan in Muqdisho ay raadineyso inay meesha ka saarto madaxweynaha dowlad goboleedka Axmed Madoobe, oo xulafo weyn la ah Nairobi, isla markaana ay u dhigaan qof daacad u ah awoodda si loo kordhiyo maamulka dhexe. Dhanka kale, Soomaaliya waxay ku eedeyneysaa Kenya inay adeegsaneyso joogitaankeeda militari ee gobolka inay taageerto oo ay ilaaliso dowlad goboleed ay u aragto “mid aan saaxiibtinimo aheyn”.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale isku khilaafsan muranka soohdinta badda, iyadoo laga yaabo inay faa’iido badan keensato shidaalka Badweynta Hindiya iyo gaaska. Muranka ayaa hadda u yaal Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, laakiin Kenya waxay wali isku dayeysaa inay gaarto heshiis ka baxsan maxkamadda. Waa aamin in la yiraahdo kiiskan, oo dhageysigiisa ugu dambeeya uu dhacayo bisha Maarso 2021, wuxuu saameyn ku yeeshay sida Nairobi ay ula dhaqanto Muqdisho. Kenya waxay umuuqataa inay kufashilmayso inay fahanto in hogaamiye soomaali ah oo maskaxdooda fayow uusan ku dhiiran karin heshiis maxkamad ka baxsan oo ay la gasho Kenya maadaama ay u jeedinayso rayiga shacabka ayaga.
Labada dal ayaa sidoo kale ku muransan saaxadda amniga. Ciidamada Difaaca Kenya (KDF) ee ka hoos shaqeeya AMISOM ee Soomaaliya ayaa wajahaya cambaareyn la sheegay inay ku wajahan yihiin taawarrada isgaarsiinta Soomaaliya, kuwaas oo muhiim u ah dhaqaalaha maxalliga ah maadaama loo adeegsado kaliya isgaarsiinta laakiin sidoo kale loo adeegsado macaamil ganacsi lacageed, iyagoo ku gabanaya inay isku dayaan inay jabiyaan -Shannada isgaarsiinta ee Shababa. Dowladda Soomaaliya waxay si cad ugu cambaareysay Kenya burburintii Taawarrada, inkasta oo mas’uuliyiinta Nairobi ay sii wadaan inay beeniyaan inay ku lug leeyihiin weerarrada.
Somaliland, oo ah gobolka waqooyi-galbeed ee ku dhawaaqay inay ka madax-bannaan tahay Soomaaliya 1991-kii, waa isha kale ee khilaafku ka dhexeeyo Muqdisho iyo Nairobi. Wefdi ka socda Kenya ayaa booqday caasimadda Somaliland ee Hargeysa bishii Luulyo si ay ugala hadlaan xiriirka labada dal iyo bishii Diseembar, Madaxweyne Kenyatta wuxuu Nairobi ku qaabilay hoggaamiyaha Somaliland Musa Biixi Cabdi. Dhamaadka booqashada, labada hoggaamiye waxay ku dhawaaqeen xiriir dhow oo ay si wadajir ah u soo saareen
Previous articleGalmudug oo bilaawday xalinta Beelo dagaalamay
Next articleMidowga Musharixiinta oo qoraal la xiriira muranka doorashada u diray Beesha Caalamka